Waxa aad u baahan tahay inaad aragto 4K oo ku saabsan 4K Ultra HD TV
Tiyaatarka Aqalka Ku rakibida & Dib-u-hagaajinta
Waxaad ubaahan tahay inaad aragto 4K ee ku saabsan 4K Ultra HD TV
Maxaad dhab ahaantii ku aragtaa taa cusub 4K Ultra HD TV?
Inkasta oo macaamiisha intooda badani ay weli isticmaalaan HDTV , haddana qaar baa hadda ku soo boodaya 4K iyagoo iibsanaya TV-ga ugu horeeya ee Ultra HD.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan 4K Ultra HD TVs, iyo, shaki, qalabkan ayaa keeni kara image sare, laakiin waxaa jira waxyaabo ay tahay in la tixgeliyo marka la eego waxa aad si dhab ah arki kartaa shaashadda.
Qiyaasta Korjoogteynta, Fadhiga Fogaanta, iyo Mawduuca
Waxaa jira saddex arrimood oo muhiim ah in la tixgeliyo si loo eego faraqa u dhexeeya HD iyo Ultra HD.
Marka hore, waxaa jira Screen Size. Inkastoo in badan oo TV-yada 4K Ultra HD ah ay kudhowanyihiin qiyaasta 65-inch iyo wax ka hooseeya, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato macaamiisha badan inay u arkaan faraq wayn oo u dhexeeya 1080p HD iyo 4K Ultra HD oo ah cabbiraadyadaas. Si kastaba ha ahaatee, qiyaasta screen, 70-inch iyo kor udhexaad ah - farqiga u dhexeeya HD iyo Ultra HD wuxuu bilaabmaa inuu noqdo mid la dareemo. Baaxada weyn ee cabbirka ayaa soo gala - farqi weyn oo la ogaan karo farqiga, marka la eego faahfaahinta lagu muujiyay shaashadda, iyadoo 4K Ultra HD TVs ay sii hayn doonto wax badan.
Marka labaad, waxaa ku jira Fadhiga Qalabka. Iyada oo la socota cabbirka sawirada, waxaad ku dhowdahay inaad ku fariisato TV-ga ayaa isbedel ku sameynaya. Tusaale ahaan, haddii aad ku qarashgareysay lacag 55 ama 65-inch 4K Ultra HD TV, waxaad ku fariisan kartaa shaashadda aad ku dhajin karto HDTV-gaagii hore ee cabbirka isla markaana weli helaya waayo-aragnimo ku qanacsan aragtida, sida pixels aad bay u yar yihiin. Haddii si kale loo dhigo, masaafada u dhexeysa qaab dhismeedka 4K Ultra HD TV waa muuqaal u baahan yahay masaafo aad u dhow oo aad ka heli karto 720p ama 1080p HDTV .
Saddexaad, waxaa jira arrinta Mawduuca. Haa, xitaa qaadashada laba arrimood ee ugu horreeya ee lagu faahfaahiyay kor, kuwaa oo ku dhejisanaya 4K Ultra HD ogeysiis ah inaysan jirin wax badan oo ah 4K content ah - taas oo macnaheedu yahay in xitaa haddii aad leedahay 4K Ultra HD TV, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin si buuxda uga faa'iidaystaan ​​awoodooda muuqaalka sare. Si kale haddii loo dhigo, sababtoo ah waxaad haysataa mid ka mid ah kuwan cusub ee gaaban ee cusub, macnaheedu ma aha in wax walba oo aad ku aragtid shaashadda ay ku jirto 4K ammaan ah.
Laga bilaabo bartamihii 2017-ka, weli wali ma jirto 4K Ultra HD TV-ga ama cable (tuners-kaaga oo ah 4K Ultra HD TV waa halbeegga ATSC HD tuner), laakiin waxaa jira xayeysiin 4K ah oo ka baxsan TV-ga tooska ah
Sidoo kale, qaabka 4K Ultra HD Blu-Ray Disc waa hadda, halka labada ciyaaryahan iyo filimkaba hadda la heli karo.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Sony ay u qaybisay xarun 4K ah ee Blu-ray Discs in, inkastoo ay weli yihiin 1080p si ay u ciyaaraan ciyaartoyda Blu-ray Disc, waxaa jira qaar ka mid ah calaamadaha lagu daray dhejiyada u oggolaanaya Sony 4K Ultra TV-yada HD si ay u soo saaraan faahfaahin dheeraad ah iyo caddaan midab leh oo lagu muujinayo 4K Ultra HD TV-yadooda.
Intaa waxaa dheer, Netflix , Vudu , iyo Amazon dhamaantood waxay bixiyaan 4K streaming. Adeegyadan waxaa laga helaa tirada sii kordheysa ee warbaahinta oo ka yimid Roku, Amazon, Google Chromecast, iyo sidoo kale xulashada 4K Ultra HD TV-yada oo ku daraya furayaasha cod bixinta HEVC - Xawaaraha ballaaran ee 15 illaa 25mbps ayaa looga baahan yahay bixinta sifiican .
Wixii mustaqbalka ah, warbaahinta, cable, iyo bixiyayaasha dayax-gacmeedka ayaa dhammaantood tijaabinaya siyaabaha loo adeegsado macaamiisha 4K.
Native 4K Ultra HD ayaa si fiican uqeexday mustaqbalka, maadama uu ka kooban yahay - laakiin xaggee ayuu ka tagaa milkiilayaasha 4K Ultra HD TV hadda haddii aysan ka faa'iideysan karin waxa yar ee 4K content hada la heli karaa?
Jawaabta su'aashaas ayaa ah in xaqiiqda ah in dhammaan 4K Ultra HD TVs ay kor u qaadi karaan cabirrada hadda jira iyo hannaanka HD si ay ugu ciyaaraan sida ugu macquulsan 4K. Sidoo kale, horumarinta isku midka ah, tirada sii kordheysa ee ciyaartoyda Blu-ray Disc, iyo aqbaarta aqalka Tiyaatarka ayaa sidoo kale ku dareysa awooda 4K kobcinta.
Inkasta oo aan sida saxda ah ee 4K ah, ayadoo ku xiran tayada maadada, natiijooyinku waxay ka fiicnaan karaan waxa aad ku aragto telefishin 1080p (qaadashada cabbirka sawirka iyo meelaha fogfog ee saameeya qodobbadan). Si kastaba ha ahaatee, aan la soo baxno, VHS, warbaahinta xalinta qiyaasta, cable, ama satellite-ka, iyo DVD-ga caadiga ah kama muuqan doono shaashadda weyn 4K Ultra HD TV, laakiin fiidiyow wanaagsan oo fiidiyow ah, cable, satellite ama Blu-ray aad ayey u eegi kartaa.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ku boodo 4K - hubi liistada mudada casriyaysan ee la heli karo 4K Ultra HD TV .
Sida helitaanka 4K oo kor u kacaya, maqaalkani waa la cusbooneysiin doonaa si waafaqsan, iyada oo macluumaadkaas la heli karo - markaa iska joog.
Waa maxay S-Video?
Ku rakibida gawaarida gawaarida ee "Silicondust HDhomer" ee "Prime Cablecard Tuner"
Sida loo xiro kuwa Hadalka ah ee Dibadda ku jira Eaves iyo Dharbaaxo
Sida loo Qaadayo iyo Isticmaalka Gurigaaga
Sida loo rakibo Wada-Hadal Fadhiya Qalab Qalabaysan
Sida Loo Dhigo Loo Helo Inta Badan Suuqa Barafka
Sida Loo Xiro IOS ama Android Qalabka Nidaamka Stereo
Dejinta Muuqaal Video: Lens Shift vs Correctionsstonestone
Hababka lagu tijaabinayo xawaaraha isku xirka shabakada
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Iskuulka Ciyaaraha ah ee iPhone, Windows, Android
Waa maxay HootSuite oo si xor ah u Isticmaaltay?
Maxaa ka dhigaya Google Duo Video Call App kala duwan
Dib u eegista alaabta: Scanner Scanner Scanner
Muuqaal Fikrado ah
Dejinta Bass ee Masraxa Guriga Si sax ah ula Maaraynta Maareynta
Garmin's Forerunner 225 Ka daawo Heerka Wadnaha lagu dhisay
Liiska Barnaamijka Isgaadhsiinta ee Damiinka Bixiya
Sida loo Xaqiijiyo D3dx9_31.dll Looma Helin ama La Dhimo
Ma cusbooneysiin karaa Stereo My Stereo?
Ka hel Action Action Action Free Adobe Photoshop si aad u bixiso indhaha casaanka
Buugaagta ugu wanaagsan ee loogu talagalay moodooyinka 3D iyo digital sculptors
10 Miisaanka iyo Ha Ku Bixin Diyaarinta Farsamada
Sida Loo Dhoofiyo ama Loo Furo Khariidadaha Fudud ee Khadka Suugaanta ah ee ku yaal IOS
Tilmaameeyaha ugu dambeeyay ee Tilmaamaha Gawaarida Taleefanka gacanta
Sidee Ayuu Isbarbardhigaa Kabaha, Satellite, iyo IPTV?
Qeexida Heerka sare (HD) Fursadaha Diiwaanada Dijital ah
5 Qaboojiyeyaasha Qaboobaha ah ee ka hooseeya $ 30
Sida loo jabiyo GPU loogu talagalay ciyaaraha casriga ah